फेसियल हाउसको जाडोमा विषेश छुट योजना,१ जनाको फेसियलमा १ जनालाई फ्रि - Arthatantra.com
फेसियल हाउसको जाडोमा विषेश छुट योजना,१ जनाको फेसियलमा १ जनालाई फ्रि
काठमाडौ । फेसियल हाउसले शाखा विस्तार संग संगै यो जाडोलाई भारि छुटको योजना ल्याएको छ । सिटिसी मल सुन्धारामा रहेको लक्जरी ब्राञ्चमा १ हजार रुपैयामा नै दुईजनाले फेसियल गर्न पाउने भएको छ । भने स्टालिस्ट हेयर कटीङमा क्लिजीङ फ्रि पाउन सकिनेछ ।
फेसियल हाउसका प्रवन्ध निर्देशक तथा सौन्दर्य विज्ञ शुष्मा महराका अनुसार जाडोमा कपाल मात्र नभएर अनुहार, हात र खुट्टा समेतको ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस कारण फेसियल हाउसले हेयर(कपाल) ,फेसियल(अनुहार), हातका लागि मेडिकियर र खुटको लागि पेटिकियर एउटै प्याकेजमा ल्याएको छ ।
लगभग २ घन्टाको सर्भिसलाई ५ हजार पर्ने भएतापनि २५ सयमै यो सुविधा लिन सकिने छ । फेसियल हाउस काठमाडौंभित्र भएका ब्युटि सैलूनहरु मध्येकै उत्कृष्ट सैलून अन्तरगत पर्दछ । फेसियल हाउसले ब्यूटि टे«निङ सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालीहरुको छाला र कपाललाई मध्यनजर राख्दै चीन, मलेसिया, कोरिया र थाईल्याण्डको कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर हर्वल ब्यूटी केयर कस्मेटिकको होलसेल तथा रिटेल सेवा पनि दिंदै आएको छ ।
फेसियल हाउसका अन्य शाखाहरु काठमाडौंको चाबहिल, बागबजार, पोखरा र काकडभिट्टा समेत सञ्चालनमा छन् । फेसियल हाउसको लक्जरी ब्राञ्चमा टाटु रिमूभर लेजर मेसिन, हेयर, ब्यूटि र स्किन केयर मेसिन, कृतिम परेला प्रत्यारोपण (आई लाइसिस एक्सटेन्सन), जेल नेल आर्ट, पर्मानेन्ट मेकअप, पेयर सिन, डेड लक, मेडिकेयर, पेडिकेयर जस्ता नया“ पुस्तामा प्रचलित धेरै प्रकारका प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक १९
५५ दिनको श्रमदानपछि गिरानचौरबाट धुर्मुस सुन्तलीले नेपाली सेनालाई गरे बिदाई ! काठमाण्डौं । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको गिरान्चौर […]
अब उद्योग खोल्न या खारेज गर्न धेरै नै सजिलो ! काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले निष्क्रिय रहेका उद्योगहरुको दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सहज […]
२ अर्ब ८० करोडमा हेर्नुहोस् यस्तो बन्दैछ धरहरा काठमाण्डौं । पूरातत्व विभागले धरहराको पुनःनिर्माणका लागि करिब दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँको […]
आर्थिक संकटका कारण ओझेलमा ‘कात्तिक नाच’ ललितपुर । परम्परागतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बहुचर्चित ‘कात्तिक नाच’ आर्थिक संकटका कारण […]